I-Nariska Suite Homestay Purwokerto, 3BR yosapho - I-Airbnb
I-Nariska Suite Homestay Purwokerto, 3BR yosapho
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguYadi Fakhruzein
UYadi Fakhruzein yi-Superhost
Indawo yam ikufutshane neevenkile zokutyela, izinto ezinokwenziwa yintsapho neendawo ezintle onokuzibona. Uza kuyithanda indawo yam ngenxa yezinto ezicocekileyo nezitofotofo nezipheleleyo: i-wifi yasimahla, Lonke igumbi eline-air conditioner, igumbi lekhitshi eline-microwave, into yokupheka irayisi, ifriji, isitovu segesi, umatshini wokuhlamba impahla.. Indawo yam ilungele abahambi ngezoshishino kunye neentsapho (ezinabantwana).
Kwigumbi lokuhlala kukho i-TV Curve 48" kunye ne-wifi yasimahla kunye ne-AC epheleleyo.
Kwigumbi lokutyela kukho itafile yokutyela enezitulo eziyi-6 kunye ne-AC epheleleyo, into yokufaka amanzi ashushu ekofu neti simahla.
Lonke igumbi lokulala kukho i-TV 32" kunye ne-AC epheleleyo.
Kwigumbi lasekhitshini kukho ifriji, into yokupheka irayisi, iMicrowave, isitovu segesi.
KwiTerrace thera kukho isitulo esiyi-2 sokutshaya.
I-Nariska Suite Homestay Purwokerto ene-3 KT ikwizindlu zobunewunewu nezakudala kwisixeko sase- purwokerto "Grand Safira City" enengcamango etofotofo yasebusuku elingana nehotele eneenkwenkwezi eziyi-4 ezinezinto ezipheleleyo kodwa ngexabiso eliphantsi.
- 3 KTwagen King enezinto zangaphakathi
- Lonke igumbi lokulala ligcwele i-AC kunye ne-32"TV
- Igumbi lokuhlala, igumbi le-TV kunye negumbi lokutyela eligcwele i-AC
- i-wifi enesantya esiphezulu samahala.
- 48"i-TV kwigumbi le-TV kunye neSuseeTV kunye ne-HBO Movie.
- Ifriji -
Isixhobo Sokuhambisa Amanzi Ashushu
Nesiqandisi - Iglasi enkulu -
- Umatshini Wokupheka Irayisi -
- Izinto zasekhitshini -
Umatshini ophezulu wokuhlamba impahla ozenzekelayo we-11 Kg
- Indawo yokomisa
enokhuseleko lwemvula - Iayini yombane
- Ibhodi yokuayinela ekhethekileyo -
I-Hair Drayer - Ukupaka imoto okuyi-2 simahla kwindawo engaphambili yemoto.
- 3Ř kunye neWater Heater
- iiseti eziyi-6 zeetawuli
- "Lifebuoy" Isepha
neShampoo - Coca Ekhaya yonke imihla.
Indlu enamagumbi okulala ayi-3 enendawo yokuhlambela kwigumbi ngalinye enzelwe ngokupheleleyo iindwendwe ze-Homestay ezine-AC, i-TV eyi-32 inch, i-Sprinbed enamashiti kunye nebhedi ethambileyo yaseJapan kulo lonke igumbi.
Kwigumbi lokuhlala elinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kukho isofa yale mihla yabantu abayi-5.
Kwigumbi lokuhlala kukho i-AC 48"Curve TV epheleleyo enokusetyenziswa njenge-intanethi ye-TV kunye nokusasazwa kwe-HBO Movie.
Igumbi lokutyela eline-air-conditioned ngokupheleleyo elinetafile yokutyela ekhethekileyo yezihlalo eziyi-6.
Kwiindwendwe ezithanda ukupheka, sikwabonelela ngezinto zokupheka ezaneleyo kwaye zixhotyiswe ngesitovu seGesi, iMicrowave, into yokupheka irayisi. Ifriji nendawo yokufaka amanzi ashushu nabandayo iyafumaneka nakwigumbi lokutyela.
Kwiindwendwe ezifuna ukuhlala ixesha elide, zifuna ukuhlamba iimpahla zazo, sinikezela ngomatshini omkhulu wokuhlamba iimpahla we-11 Kg, kwaye sinomatshini wokomisa iimpahla okhuselwe yimvula. Ikwabonelela nange-ayini ekhethekileyo kunye nebhodi yokuayinela.
Amagumbi okuhlambela ayi-3 kwigumbi lokulala ngalinye axhotyiswe ngento yokufudumeza amanzi, ishawa ebanzi, kunye nempompo yokuqinisa amanzi. Yonwabela ukuhlamba ngamanzi ashushu neshawa evulekileyo.
Ukutshaya ngaphakathi endlini akuvumelekanga kodwa sinikezela ngendawo yokutshaya etofotofo kunye nendawo yokuphumla ngasemva kweTerrace ngoxa wonwabele ikomityi yekofu okanye iti.
Indawo yokupaka imoto yeendwendwe phambi kweMoto enokwamkela iimoto eziyi-2.
Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi ungakhangela igama eliyintloko elithi "Nariska Suite Homestay Purwokerto".
Inani eliqhelekileyo leendwendwe eziyi-6, kodwa lisenokongeza abantu abayi-3 kuphela abanokuhlala kwiibhedi baze babhataliswe i-40 000 yomntu ngamnye.
Umbuki zindwendwe ngu- Yadi Fakhruzein
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Purwokerto Timur